Ukuphupha i-KO Drops Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuhla kwe Knockout bekumilebe yomntu wonke kangangexesha elithile ngoku kwaye bahlala bebuhlungu kwaye besoyikisa izihloko. Amachaphaza e-Knockout zizinto ezixubana nesiselo somntu okanye ukutya ngaphandle kolwazi, zibenza bozele, okanye zibenze bangabikho zingqondweni. Amaxesha ngamaxesha, le ndlela yokwenzakala komzimba ilandelwa lulwaphulo-mthetho olunjengokuphanga okanye ukudlwengula, apho ixhoba lingenako ukuzikhusela ngenxa yeanesthesia.
Kuyimpikiswano ukuba mangaphi amatyala apho kusetyenziswe khona amathontsi enkqonkqozo asetyenziselwa ukophula umntu kwaye ukuba ngaba kukho ingozi enkulu okanye ukuba amajelo osasazo abangela ukothuka kakhulu. Ngayiphi na imeko, amaphupha anolu phawu lwamaphupha ayothusa kwaye ayoyikisa, umntu uziva ephelelwe ngamandla okanye esoyika ukuba kutheni le nto yenziwa kwabanye ephupheni.
Apha kunokunceda ukuphefumla ngokunzulu kwaye wazi ukuba liphupha. Oko kubonakala kumaphupha ethu kuhlala kuyinto ephambili kwiinkqubo ebomini bethu okanye kwi-psyche yethu. Ukuwa kwe-KO akuthethi sisongelo ephupheni.
1 Uphawu lwephupha «I-KO yehla» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «I-KO yehla» - Ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-KO yehla» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «I-KO yehla» - Ukutolikwa ngokubanzi
Njengesiyobisi kunye ne-anesthetic, amathontsi enkqonkqozo anokusetyenziswa ekuqaleni ephupheni. Ukuphulukana nenyani kuba. Ukuphupha kunokubaleka kwinyani, awungethandi ukubona into ethile. Ephupheni akanako ukuyenza loo nto, uyothuka kwaye uphume. Akasenayo impembelelo kwinto eyenzekayo, enokubonakala iyoyikisa, kodwa ubukhulu becala oko kuthetha ukuba uyakulangazelela xanduva Thumela. Unokuziva ukhathazekile kwaye uphumelele kuba awukwazi ukusombulula imbambano.
Ukuba ukuphupha kulawula omnye umntu ukunkqonkqoza, oku kunokubonisa into yokuba yena Impixano phuma endleleni okanye ufuna ukufezekisa into ngokungxama nangazo zonke iindlela. Umona unokuba semva kwakhona ukuba umphuphi woyika ukuba iqabane okanye iqabane lakhe aliyi kuhlala naye. Incoko echazayo inokukunceda kunye nokuzola apha.
Kuxhomekeka ekubeni iphupha liyaqhubeka na emva kolawulo lokuwa okunkqonkqozayo, iphupha elo linokuchazwa ngokubanzi. Ukuba iphupha liphuliwe, oku kunokuba yinto yabacinezelweyo kunye nabangakhathaliyo. iimfuno kunye neminqweno yesini eyimfihlo.
Ukuba ungumdlwenguli ngokwakhe, oku kungabonisa ukuba uyamcinezela amandla iinxalenye zakhe. Ubusela, kwelinye icala, buthetha Uloyiko lokuphulukana okanye, ukuba iphupha liphanga umntu ongenakuzikhusela, ngenxa yokuziphatha okuneentloni.
Uphawu lwephupha «I-KO yehla» - Ukutolikwa kwengqondo
Njengokuba uloyiko luza kuwisa iphupha, lingatyhila lukhulu ngokuphupha ngawe. I-Anesthesia ngokusebenzisa amathontsi inokuthetha ukuba iphupha loyika inyani, mhlawumbi lifuna elingalunganga. i-verdad akaboni, ukuba ngoku ufakwa ngamathontsi ngenkani okanye ngaphandle kongenelelo.
Nokuba iphupha ngokwalo lingumenzi wobubi, isenokuba lixhoba. Yabelana yenza ngokwakho. Ke ngoko, kuya kufuneka uzibuze ukuba yintoni le ungayamkeliyo kuwe okanye zeziphi iinxalenye zakho ongathanda ukuzinyanga ngogonyamelo olunje.
Kunokubakho ifayile ye ngqu zulwano phakathi kwalowo uphuphayo nomnye umntu, amfuzisela yena ephupheni ngeendlela ezinzima. Rhoqo malunga neemfuno kunye nemvakalelo yokunqongophala.
Uphawu lwephupha «i-KO yehla» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha lumele inyani yokuba umphefumlo ungasemva kwe Imvelaphi ujonge iinkolelo zakho zokomoya. Kuvakala ngathi ulahliwe ngokungenakunceda kwaye kufuneka aqale ahlule phakathi kokubomvu okubomvu, ubuqhetseba, kunye nenyani yokubuyela ngaphakathi. ibhalansi ukufumana kwakhona.